F ： Iza amin'ireo fampahalalana mety ilaina amin'ny teny nalaina avy amin'ny bobongolo?
A: Miankina amin'ny vokatrao izany, ka tongasoa ny hifandray amin'i Heya Mould mba hahafaty azy. Noho ny antony, tsara kokoa raha manana ireto fampahalalana ireto ianao etsy ambany: 1, sary ohatra misy habe na 2D / 3D endrika
F: Ahoana ny fankatoavana santionany?
A: Azonao atao ny manatona ny orinasanay mba hizahana ny fitsapana bobongolo mivantana, koa Heya Mould dia handefa santionany & horonan-tsary mihodina aminao.
F ： Fepetra fandoavana
A: 50% T / T mialoha, ary mandanjalanja alohan'ny fandefasana entana.